Uyini umehluko phakathi kwe-multi-layer solid solid flooring floor kanye ne-three-layer solid solid flooring - Isazi seZD Floor
Ikhaya>Uyini umehluko phakathi kwe-multi-layer solid solid flooring floor kanye ne-three-layer solid solid flooring
Hlela: UDenny　2019-12-06
Mayelana nesendlalelo esingaphezulu
(1) Umehluko wokuqina
Ingqimba eqinile yezinhlaka ezintathu ezihlanganisiwe inobukhulu obungama-millimitha ayi-3, futhi ububanzi obungaphezulu ngokuyisisekelo bungamamilimitha angama-0.6-1,5.Uhlaka olungaphezulu lwamakhasi amathathu lungaphindeka amahlandla ayisihlanu ungqimba lomhlaba ongaphezulu kolayini. Embonini yokunikela ekhaya, kunomusho onjengokuthi "ucezu olulodwa lwebhodi nezingcezu ezintathu zezinto", okuyilokho esikubona kungumkhiqizo osuqediwe. Isibonelo, uma isiqeshana sefenisha sinesisindo esingamaphawundi ayikhulu, lapho-ke ukhuni oluluhlaza olusebenzayo kungenzeka lube ngamakhilogremu angamakhulu amathathu. Umkhiqizo osuqediwe Umehluko omncane ubonakala ezintweni ezingavuthiwe.
Ukuthatha ukhuni oluqinile lwendlu ka-Shengxiang njengesibonelo, ungqimba olungaphezulu lwesitezi eliqediwe lu-3mm-4mm ubukhulu, obukeka bungaphezu kokwahlukaniswa komhlaba ongaphezulu, kepha njengezinto eziyisisekelo ezingavuthiwe, ukusetshenziswa kwezinto ezingavuthiwe kuyadingeka. Okuningi, futhi kuboniswe kunani lomkhiqizo inani elithe xaxa.
Ubukhulu bale mikhiqizo emibili yehlukile .Qiniseka ukuthi, ungqimba oluqinile lwendilinga oluhlanganisiwe oluyizingxenye ezintathu luba okungenani ngama-50% ubukhulu uma ungqimba oluhlanganisa izingqimba eziningi zokhuni oluqinile. Umehluko ungaba ngaphezu kwezikhathi ezi-5.
(2) Ukuhlukahluka kwenqubo
Umehluko kubuciko bokwenza umsebenzi wobuchwepheshe obukhulu. Isendlalelo esingaphezulu sokhuni oluqinile oluhlanganisa izingalo ezintathu sihlanganiswa sonke njengokhuni ngenxa yobuncane obungama-3, kanti ungqimba olungaphezulu lwesitezi esiqinile sokhuni oluyindilinga luyisisekelo sokhuni esisikiwe.
Ukubizwa okubizwa ngokuthi yi-sawn mbao (izingqimba ezintathu) kubhekiselwa ekusikeni okuqondile kwezingodo. Isimo sezinkuni ezenziwe ngokhuni esivame ukwedlula 2mm ubukhulu, esingeke siguqule isimo sokhuni.
Izinkuni ezibizwa ngokuthi i-rotary cut wood (i-multi-ungqimba), ezibizwa nangokuthi izinkuni ezihleliwe, zifana nesingathekiso. Kufana nokusika i-apula ikhasi kanye nokujikeleza ukusika izinkuni .Imilo yokuqala ngemuva kokusika ifana ne-apula le-peel, hhayi ukhuni oluyisicaba. Ngemuva kokwelashwa kuthambile. Isici sezinkuni zokusika ezijikelezayo ukuthi izinkuni ezisikiwe zincane kakhulu, ngobukhulu obungama-0.6-2 mm, futhi isivuno siphakeme kakhulu.
I-Rotary cut Wood inezinga eliphakeme lokukhipha kepha ibhubhisa ukwakheka kwangaphakathi kwezinkuni futhi ingazinzi. Yize izinkuni ze-sawn zilahlekelwe kakhulu, zizinzile ngokwedlula izinkuni zokujikeleza futhi azithambekele ekuqhekekeni, ngakho-ke kusukela kulo mbono, izindleko ezimbili zenqubo zinamanani ahlukile.
Mayelana Nezinto Zokubamba
Izinsimbi eziyisisekelo ezinokhuni oluhlanganisa izingqimba ezintathu zisikwa kulo lonke ibhodi .. Ngakolunye uhlangothi, zinezidingo ngeminyaka yomuthi, futhi ngasikhathi sinye, zidinga ukwelashwa ngempilo.
Inhlanganisela yezinkuni eqinile enezinhlaka eziningi ihlanganiswa ndawonye, futhi asikho isidingo sokhuni. Kuleli phuzu, izindleko zihlukile kakhulu;
Ngasikhathi sinye, kukhona ukuhlangana okuhlanganayo phakathi kwezinto ezisetshenziswayo eziyizingqimba ezintathu, inqubo yokucubungula iyinkimbinkimbi kakhulu, kepha ukwakheka kuyakuqinisekisa ukuthi izinto eziyinhloko ngeke zikhiqize i-deformation enhle, noma ngabe isetshenziswa endaweni yokushisa phansi, akunankinga, ukuzinza Kungaba ngcono.
Izendlalelo ezintathu zokhuni oluqinile zingenziwa ngesakhiwo sebhande, futhi izendlalelo eziningi zingenziwa kuphela esakhiweni segobela.
Esokuqala ukwenza izingidi ziqiniswe ngaphandle kokukhipha umthungo .. Into ebalulekile ukuthi inemvelo kakhudlwana ngaphandle kweglue. Ngakolunye uhlangothi, ilokhi ilahlekelwe kakhulu kwezinto zokusetshenziswa, kanti ngakolunye uhlangothi, idinga ubuchwepheshe obuphakeme nemishini. Ngakho-ke, kuphela izinhlobo ezithile ezinkulu namafektri ezingenza kangcono. Ngakho-ke ukukhiya kuphela ngomlomo osicaba onezendlalelo eziningi ezindlekweni zokukhiqiza kuphezulu kakhulu.
Ngaphansi kwendawo yokufudumeza phansi, i-barking barking ibaluleke kakhulu. Okokuqala, kunempilo futhi kuyimvelo ngaphandle kwesidingo sokusebenzisa i-glue lapho ufaka ilokhi.Iqiniso lesibili ukuthi kufanele unake ngokukhethekile kunoma yiziphi izinkinga ngokushisa phansi. Kungokwehlukanisa phansi phansi phansi ukuze ihlolwe. Uma kungumugqa wensimbi eqinile eyakhiwe ngokhuni, ngoba akudingi ukwelashwa kwethilikidi, phansi yakho kungahlukaniswa kaninginingi ngaphandle kokulimaza ukubonwa phansi. Ngakho-ke, umndeni wokufudumeza phansi uyelulekwa ukuba ukhethe phansi-uhlobo lwendlu yokukhiya ngangokunokwenzeka lapho ukhetha phansi.
Mayelana nokuvikelwa kwemvelo
Umehluko ezindlekweni nasezimpawuni eziphakathi kongqimba olunamakhompiyutha amathathu. Kukhona futhi umehluko obaluleke kakhulu ekusetshenzisweni kwezimpawu zokuvikela imvelo zale mikhiqizo emibili. Ngokombono womhlobiso wendlu yethu, ezempilo nokuphepha zibaluleke kakhulu, ngakho-ke ngikubeka ngamabomu lokhu ekugcineni.
Ukulimala okukhulu emzimbeni womuntu okubangelwe yile nto yokuhlobisa yi-formaldehyde. Umthombo we-formaldehyde ikakhulukazi uyiglue, ngakho-ke okuqukethwe kwenjoloba phansi kuyinkinga esemqoka.
Isitezi esiqinile esingunxantathu sokhuni siqhathaniswa nesisekelo sezinkuni eziqinile ezihlanganisiwe ngokwesakhiwo. Njengoba sonke sazi, izingqimba ezintathu kuphela ezibiyelwe kanyekanye, futhi ungqimba oluningi luvame ukuba izingqimba eziyi-11 noma eziyi-9. Thatha isibonelo okulula ukusiqonda: uma izingqimba ezi-3 zihlanganiswe ndawonye, udinga ukufaka i-glue kuzinhlangothi zombili. Uma izingqimba eziyi-11 zihlanganiswa ndawonye, okungenani izinhlangothi eziyishumi zidinga ukukalwa. Akunzima ukubona kulesi silinganiso ukuthi uphansi oluqinile oluhlanganisa izingqimba ezintathu luqukethe okuncane kwe-glue futhi kunobungani bemvelo kakhudlwana. Izinkuni eziqinile ezingunxantathu ezisetshenziswa uShexixiang zihlala zinemvelo kakhulu, ngakho-ke ziphephile kakhulu.
Kukhona nezindawo zokuvikela ezemvelo ngesikhathi sokufakwa. Omunye wemikhiqizo emibili awudingi ukwenziwa ushukela, kanti omunye udinga ukufakwa ushukela.Umehluko omkhulu yisona sikhombisi.
Ukubekelwa phansi kwezinkuni okuqinile okwenziwe ngamacwecwe amathathu kungenziwa ekuxhumekeni kokukhiya, okungenaglue ngokuphelele ngesikhathi sokufakwa; kuyilapho izingqimba eziningi ze-solid solid solid composite zixhuma ngomlomo, okufuna ukufakwa kweglue ngesikhathi sokufakwa. Ukusuka kuleli phuzu, wonke umuntu uyaqonda ukuthi lezi zingqimba ezintathu aziqukethe kuphela i-glue encane, kepha ayikho indawo yokusebenzisa i-glue. Uma uqhathaniswa nezinye izingqimba, izingqimba eziqinile zokhuni ezintathu azigcini nje ngokuba nempilo futhi zinobungani bemvelo ngokuya ngokuqukethwe kwe-glue.
Uyini umehluko phakathi kwe-multi-layer solid solid flooring floor kanye ne-three-layer solid solid flooring Okuqukethwe okuhlobene
1. Uma kuqhathaniswa nokhuni oluqinile lwaphansi lokhuni, ubukhulu bukhulu. 2. Kunezinhlobo eziningi zemibala, ezingalingisa okusanhlamvu okwemvelo okwemvelo noma amaphethini wokufakelwa, amaphethini...
Isakhi esiyisisekelo se-PVC flooring yi-polyvinyl chloride, bese kunezelwa ezinye izakhi ukuqinisa ukumelana kwayo nokushisa, ukuqina nokuqina .Uthandwa kakhulu ngumphakathi ngokuhlobisa futhi kuyint...
Kulezi zinsuku, imindeni eminingi yanda isebenzisa ukufakwa kwamapulangwe ekuhlobiseni, kodwa ukuthi ilungiswa kanjani phansi kokhuni bekulokhu kuyinto ekhanda. Asilandele kanye nomhleli. Okokuqala,...
Isazi seZD Floor